Meicet |China Microdermabrasion Machine Manufacture and Factory
Sitsalele umnxeba:+86 13167223337
Umatshini wokuhlaziya ulusu
I-scalp Skin Analyzer
M906 uQhagamshelwano lweWifi
IsiHlalutyi soBume boMzimba
I-3D Visbody-R Explorer
I-3D Visbody R
Inaliti ye-Meicet yasimahla ye-Mesotherapy yoMshini wobuhle Collag...
I-Meicet Professional ye-3D yoMzimba weSkena esiPhakamileyo uHlalutya...
I-Meicet ye-3D yeskena soMzimba soBume boMzimba kunye nokuma ...
Ubuchwephesha obuphezulu bokwenyani boBume boMzimba we-3D kunye neP...
IsiHlalutyi solusu soBuchule esineKhamera yeMeicet MC2400
Umatshini woHlalutyo lweLusu loBuso lweMeicet onolwazi...
Uhlalutyo lweSkin loBuso lobuNgcali obuchwephesha
Umenzi woMashini woHlalutya loLusu oluNgcali ngoku...
Uluhlu oluphezulu lwe-Skin Machine Meicet Resur MC2400
I-3D ye-Skin Analyzer enekhamera ye-Meicet Resur MC2400
Umatshini wokuHlalutya ukuKhanya kwe-UV iMeicet Resur MC2400
Isixhobo sokuhlalutya ulusu ngekhamera yeMeicet Resur MC2400
10-in-1 Microdermabrasion Machine Meicet Backin Beau...
MEICET 10-in-1 Multifunction Microdermabrasion Machi...
I-10-in-1 ye-Multifunction Cleaning Equipment e-Mei...
Uhlalutyo lwe-3D lweSkin uBuso boBuso boHlalutya loLusu loBuso...
I-3D Skin Scanners iMeicet MC88 yeeVenkile zokuthambisa
I-Meicet ye-3D yoMhlalutyi woBuso we-UV yoMthi wesibane uHlalutyo lweLusu...
MEICET 10-in-1 Multifunction Microdermabrasion Machine for Tightening Lifting Cleaning
10-in-1 Multi-Function Beauty Isixhobo
Ifanelekile:I-Salon yobuhle, amaZiko okuKhathalela ulusu, i-SPA njl.
Imisebenzi:Ukuphakamisa, ukuqinisa, ukucocwa
Amandla:65W, 50Hz, 110 ~ 240VAC
Ubushushu bokusebenza:15 ~ 35℃
IMicrodermabrasion Multifunctional Beauty Care Machine
I-Backin sisixhobo solawulo lwesikhumba esinobuchule kunye nesibanzi.Idibanisa amacandelo ahlukeneyo asebenzayo kwaye ingasetyenziselwa kwiiprojekthi ezahlukeneyo zokulawula ulusu.Imisebenzi ephambili yesixhobo ibandakanya ukucocwa kobuso kunye nokuthambisa, ukuncedisa ukuqaliswa kwemveliso, ukuphucula ukuxutywa kwe-serum, kunye nokuphucula i-metabolism yesikhumba, njl.
BACKIN Microdermabrasion MachineIingenelo
· IiHandle ezi-9 zokusebenza
· 10.2 intshi Touch Screen
Iilwimi ezininzi: IsiNgesi, isiKorea, isiTaliyane, isiTshayina
· Ngenaliti Mahala
· Ukhuseleko oluphezulu
· Ulawulo oluchanekileyo
Ulwimi, ukukhanya, umthamo unokulungiswa kwi-interface yokuseta.
3 Ulwimi lwereferensi yakho
IsiNgesi saseKorea kunye nesiTshayina
Iziphatho ezili-10 —Imisebenzi eli-10
Isiphatho ngasinye somsebenzi sihambelana nephepha lokusebenza kumatshini.Inqanaba lamandla, ixesha, kunye nemowudi inokusetwa ngokuthe ngqo kujongano lokusebenza.
Ukusebenzisa umgaqo we-vibration high-frequency vibration, amanzi afakwe kwi-atom ngelixa esusa ukungcola kwesikhumba, ukuze afezekise umphumo wokucoca.
I "Ion Clip" isebenza kakhulu emehlweni nakwezinye iindawo ezincinci.Sebenzisa i-micro-current ukuvuselela ulusu;ncedisa ukunyuswa kweemveliso zokunakekelwa kwesikhumba ezimhlophe, kwaye wenze ukufunxa ngokukhawuleza.
Xa usebenza ikliphu ye-ion, i-ion roller, kufuneka udibanise ucingo olubomvu kwisibambo se-ion, kunye nocingo olumnyama kule ntonga engalunganga, kunye nentonga engafanelekanga kufuneka ibanjwe ngumthengi.
Ukusebenzisa umgaqo kanomathotholo ukufudumeza iliso okanye izicubu zobuso kwi-fixed layer, emva koko i-collagen engaphantsi kwe-subcutaneous inokudityaniswa kwaye iqiniswe, ukuze kuphunyezwe umphumo wokunciphisa imibimbi.
HOT & KUPHOLE
Ukusebenzisa umsebenzi wokubanda / ukushisa kwesikhumba kunokunceda ukukhuthaza ukujikeleza kwegazi, ukwandisa imetabolism kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle.
"Ion Roller" isebenza kwindawo yobuso.Sebenzisa i-micro-current ukuvuselela ulusu;ncedisa ukunyuswa kweemveliso zokunakekelwa kwesikhumba ezimhlophe, kwaye wenze ukufunxa ngokukhawuleza.
Sebenzisa uxinzelelo lokutshiza iiathom zamanzi ezintle okanye izondlo ngokulinganayo kwindawo yokusebenza, okwenza kube lula ukuba ulusu luzalise umswakama okanye lufunxe izondlo.
Ukusebenzisa umgaqo we-high-frequency vibration, iinqununu zezondlo ezineemolekyuli ezinkulu zinokuthi zenziwe zincinci, ngoko ke amandla okungena kunye nokusebenza kokufunxa kunokuphuculwa.Lo msebenzi usebenza ikakhulu kwiindawo ezijikeleze amehlo.
Izithako zezondlo zemaski yobuso zinokungeniswa ngokukhawuleza eluswini ngaphakathi kwemizuzu eyi-15 ngokusebenzisa i-biological microcurrent.I-1mA microcurrent iya kusasazwa kwizicubu zomzimba wonke.
Ukusebenzisa umgaqo we-high-frequency vibration, iinqununu zezondlo ezineemolekyuli ezinkulu zinokuthi zenziwe zincinci, ngoko ke amandla okungena kunye nokusebenza kokufunxa kunokuphuculwa.Lo msebenzi usebenza ikakhulu ebusweni.
1. Singanceda ukuhlaziya inkqubo kunye nokuphucula ukusebenzisa isiphumo ukude.
2. Sikubonelela ngewaranti yeenyanga ezili-12.Ukuba kukho naziphi na iindawo ezisetyenzisiweyo ezifunekayo, siya kukuthumelela iinxalenye ezisecaleni kwangoko, simahla.
3. Akukho xanduva lokutshabalalisa okwenziwe ngumntu.
Ngaphambili: I-10-in-1 ye-Multifunction Cleaning Equipment ye-Meicet Backin Model
Okulandelayo: 10-in-1 Microdermabrasion Machine Meicet Backin Beauty Machine
Umatshini wokuPhakamisa ulusu lweFractional Microneedle RF
Umatshini weMicrocrystal RF Fractional
umatshini wokuphakamisa ubuso be-microcurrent
Multifunction Facial Beauty Isixhobo
Multifunction Facial Beauty Machine Isixhobo
multifunction umatshini wokunyamekela ulusu
Qhagamshelana ne-US ukuze ufunde ngakumbi
Umatshini wokuHlalutya ulusu loBuso obugcweleyo be-3D boBubuhle...
Uhlalutyo lwe-3D lwe-Skin Umatshini woHlalutya loLusu loBuso lwe-F...
Umatshini woBuchule boNyango we-3D Faic...
Umenzi womatshini wokuHlalutya ulusu oluNgcaliyo...
Nceda ufake iinkcukacha zakho zombuzo ezifana negama lemveliso, inombolo yemodeli, ubuninzi, njl. Ukuba kunokwenzeka, nceda uqhagamshelane nathi kwi-intanethi, enkosi.
I-Shanghai May Skin Information Technology Co., Ltd
Iimbangela zePores ezinkulu
Ama-pores amakhulu anokwahlula kwiindidi ze-6: uhlobo lweoli, uhlobo lokuguga, uhlobo lokuchithwa kwamanzi, uhlobo lwe-keratin, uhlobo lokuvuvukala, kunye nokunyamekela okungafanelekanga.1. I-oyile yohlobo lwemibhobho emikhulu Ixhaphake ngakumbi kulutsha kunye nolusu olunamafutha.Kukho okuninzi...
Ubume bolusu bubuso obubodwa bolusu lwabantu kunye neeprimates, ngakumbi iimpawu zangaphandle zelifa leminwe (iinzwane) kunye nemiphezulu yesundu.I-Dermatoglyphic ikhe yathathwa kwisiGrike, kwaye i-etymology yayo ...
Indlela yokuBonisa iPolarization yeMeicet Ski...
Inkqubo yokucinga eqhelekileyo isebenzisa amandla okukhanya kumfanekiso, kodwa kwezinye izinto ezintsonkothileyo, kudla ngokungenakuthintelwa ukuhlupheka ngenxa yokuphazamiseka kwangaphandle.Xa ukukhanya kokukhanya kutshintsha kancinci kakhulu, kuya kuba...
Fumana Amaxabiso aneenkcukacha